ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုလက်ခံရယူသည့် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ… | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Aung San/Aung San Suu Kyi » ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုလက်ခံရယူသည့် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ…	15
Posted by zaw min on Jun 17, 2012 in Aung San/Aung San Suu Kyi, Photography | 15 comments
About zaw min
zaw min has written 89 post in this blog.
View all posts by zaw min →	Blog
ahnyartamar says: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းဖြင့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို အမြန်ဆုံး ထမ်းဆောင်နိုင်ပါစေလို့ စိတ်ရော၊ ကိုယ်ပါ ဆန္ဒပြုပါတယ်။
YE YINT HLAING says: ပုံကော စာကော စုံသွားပြီမို့ ကိုသုည ရေ၊၊၊ ကျေးဇူးပဲဗျို့ !
Nyein Nyein says: မနက်ဖြန်က အမေစုရဲ့မွေးနေ့ဆိုတာ သေချာလားဟင် ကိုထူးဆန်းရေ။ သေချာသိချင်လို့ပါ။ အမေစုတစ်ယောက် ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ ဘေးရန်ကင်း၍ အေးချမ်းပါစေ။ အမေစုက ဗေဒါရောင်လေးဝတ်ထားတာကိုတွေ့ရတာ စိတ်ချမ်းသာစရာပဲနော်။
kaung lay says: ဟုတ်တယ်ဗျ
pan pan says: ၁၉့ရက်နေ့ ဇွန်လက အမေစုမွေးနေ့ပါ
Was this answer helpful?LikeDislike 2170
Thel Nu Aye says: အင်္ဂါသမီးအမေအတွက် မိသားစုနဲ့လဲဆုံ မွေးနေ့မွေးရက်လဲထပ်တူကျတဲ့ထူးခြားတဲ့အမွေးနေ့လေး ပါ။ အမေ့စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာစွာဖြင့် နိုင်ငံအကျိုး သည်ပိုးနိုင်ပါစေ။ မွေးနေ့ပေါင်းများစွာ လဲပျော်ရွှင်စွာကျော်ဖြတ်နိုင်ပါစေ။
ဗိုလ်စံ ဖဲ says: ဘ၀ရပ်တည်မှုအတွက်
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 223
MTY says: ဘယ်သူတွေဘာပြောပြော..မြန်မာထဲကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တစ်ယောက်ဘဲ
etone says: မြင်ရတာ အရမ်းကို ကျက်သရေရှိတဲ့ ပုံတွေပါပဲ ….. ။
မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက် ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံများ ကြားမှာ … လေးစား အတုယူဖွယ်အဖြစ် ရပ်တည်နိုင်တာ ၀မ်းလည်းသာ ၊ ဂုဏ်လည်းယူမိပါတယ် ။ …. သူများ နိုင်ငံယဉ်ကျေးမှု ပေါင်တိုစကတ်တွေကြားထဲ အမေစုရဲ့ ဖက်ရှင် ….( မြန်မာ့ဖက်ရှင်)ကို .. ကမ္ဘာတ၀ှမ်းလုံး သတိပြုမိလိမ့်မယ် ထင်ပါရဲ့ … ။ မြန်မာ့ ပိုးထည်တွေ ၊ ချိတ်ထည်တွေ နောက်ပိုင်း ကမ္ဘာဖက်ရှင်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ် …. ။ ပြန်တင်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် … မြင်ရတာ မင်္ဂလာရှိလွန်းလို့ပါ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3255
weiwei says: ကျက်သရေရှိလိုက်တာ …
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2716
kyeemite says: ကျေးဇူးပါကိုရင် သုညရေ…
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု says: ကျုပ်လည်းလိုခြင်လိုက်ဒါ
ကြက်ဖင် ( အကယ်ဒမီ ) ( ကျား ) says: လာယူလေ နဘန်ဆု
ကြောင်ဝတုတ် says: တိုင်းပြည်အတွက် အသက်(၆၇)နှစ်အရွယ်အထိ ပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ပေးနေတာတွေအားလုံးအတွက်…
Comments By Postပြင်းထန်သော အဆုတ်ရောဂါကို ကုသနိုင်မည့် နာနိုဆေးပညာ - မင်းမင်း - Ma Maမန်းဂဇက် ကဗျာချစ်သူများ၏ ကဗျာပြခန်း (ပြခန်းအမှတ် တစ်) - Ma Ma - weiweiရပ်ကွက်မှသည် နိုင်ငံဆီသို. - weiwei - ရွှေတိုက်စိုးအတု - Munetez - မောင် ပေ``ရွာထဲမှာ ဆုံကြတာပေါ့´´ - Ma Ma - padonmarသန့်ချင်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ အကြောင်း - Munetez - Ma Maအတိတ်က ခြေရာတွေပြန်ကြည့်ရအောင် - Ma Ma - အရီးခင်လတ်Comment မှာ လူစည်ချင်ရင် (ယတြာ) - Ma Ma - အလင်း ဆက်ရွာသူ/သားများ အတွက် - Munetez - Munetezနားစွန် နားဖျား ရပ်ကွက်...။ - Munetez - Munetezမိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - black chaw - black chawသဂျီးနောက်ကနေ ဘယ်သူထိုး who? - Ma Ma - အရီးခင်လတ်အဟံ ပထမံ - padonmar - natureမြေမျိုပျောက်ကွယ်ခြင်း - padonmar - အလင်း ဆက်အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း ( မေ ၂၀၁၃) - Munetez - kaiသူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - kai - အလင်း ဆက်အိပ်ပျော်နေသူများ နှိုးရခက်သည် 。。。。。。。。。 - ရဲစည် - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေးကျွန်ုပ်ရောက်ရှိခဲ့သော ကျတ်တို့ဌာနီ - အလင်း ဆက် -etone၄ လရှည်ကြာ ရွာထဲမှာ - Ko chogyi - Mr. MarGaဘ၀မှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတော့..... - မောင် ပေ - အရီးခင်လတ်လူစွန့်စားမြင့်ကျော်နှင့် ခေါင်းပြတ်နတ်ရုပ်တု (စ/ဆုံး) - မောင် ပေ - Mr. MarGaသူတို့ ရောက်လာကြတော့မည်၊ သတိသာ ထား - naywoon ni - kyeemiteရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်း - Mr. MarGa - kyeemiteအထူးတလည် ကျေးဇူး တင်ရှိခြင်း - Mr. MarGa - Mr. MarGaအမျိုး ဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ကြမယ် ဆိုရင် ဖြင့် - kai - ဦးဦးပါလေရာEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (77895 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70551 Kyats )naywoonni (67420 Kyats )zaylay (67079 Kyats )weiwei (66886 Kyats )cobra (62183 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (59081 Kyats )MaMa (57965 Kyats )Top Posts & Pagesသင်ဇာဝင့်ကျော် နဲ့ မဟူရာ အလှ...